Horudhac: Athletic Club vs Real Madrid…(Tartanka Spanish Super Cup oo caawa lagu soo gabagabeynayo Sacuudiga & Waxyaabaha aad uga baahantahay kulankan) – Gool FM
Horudhac: Athletic Club vs Real Madrid…(Tartanka Spanish Super Cup oo caawa lagu soo gabagabeynayo Sacuudiga & Waxyaabaha aad uga baahantahay kulankan)
(Riyadh) 16 Jan 2022. Kooxaha kubadda cagta Athletic Club iyo Real Madrid ayaa caawa ku dagaallami doona fiinaalka tartanka Super Cup-ka dalka Spain kaasoo sidii ku jadwaleysneyd lagu soo afmeeri doono caasimadda dalka Sacuudiga ee Riyaad.
Labadan naadi ayaa kulammo bug-bax ah wareeggii nus-dhammaadka kaga soo gudbay Atletico Madrid oo gacmaha Athletic sababsatay iyo Barcelona oo ay Los Blancos ciidda afka u dartay.
Tartanka: Spain – Super Cup
Saacadda ay ciyaarta billaabaneyso: 09:30 Habeennimo xilliga Geeska Afrika.
Garsooraha: César Soto Grado (Spain)
Keliya Unai Vencedor ayaa ka maqnaan doona naadiga Athletic Club iyadoo macallinka naadigaas ee Marcelino uu heysto saf dhammeystiran maadaama ay usoo laabteen Unai Nunez iyo Asier Villalibre.
Dhinaca kale, Dani Carvajal ayaa laga helay Korona Fayras isagoo ka maqnaan doona Real Madric caawa, waxaa sidoo kale maqnaan doona Marco Asensio oo dhaawac qaba, intaas waxaa u sii dheer in difaacyada dhexe ee David Alaba iyo Jesus Vallejo shaki wey la gelinayo inay ciyaartan taam u noqdaan.
Real Madrid ayaa la kulantay keliya hal guul darro shantii ciyaarood ee ugu dambeysay oo ay la ciyaartay Athletic Bilbao tartammada oo dhan.
Athletic Bilbao ayaa tartanka Supercopa de Espana ku guuleysatay saddex jeer oo ay ka jirto xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ee 2020/21. Kaliya Barcelona iyo Real Madrid ayaa kaga guulo badan koobkan.
Los Blancos ayaa iyaduna ah kooxda labaad ee ugu hanashada badan tartankan iyadoo qaadday 11 jeer, Barca oo 13 jeer hanatay ayaana ka sarreysa.
Horudhac: Liverpool vs Brentford... (Reds oo aanan heysan Mane iyo Salah ciyaar EPL ah markii ugu horreysay tan iyo...)